Chinja museve unofinha weGoogle Mepu yemota (TUTORIAL) | IPhone nhau
KuActualidad iPhone isu tinogara tichiziva kuti iwe unogona kuisa yako iPhone zvakanyanya sezvazvinogona, zvishoma kana isu tichifunga nezvezvirambidzo izvo zvinowanzoitwa nekambani yeCupertino mumashoko aya, kunyange pasina mubvunzo zvakanyanya kupfuura izvo zvaive zvichikwanisika kusvika ikozvino. Ngazvive sezvazviri, kunyorera kweGoogle Mepu kunoumba chikamu chakakosha chehupenyu hwedu hwezuva nezuva, kunyanya munyika dzakaita seSpain uko (kupfuura isu) Apple Mepu dzakashomeka maererano neruzivo. Tinokuratidza maitiro ekuchinja museve unofinha weGoogle Mepu kune imwe mhando yechiratidzo pane yako iPhone, usarasikirwa nayo.
Iyi dzidziso, sezvaungafungidzira, iri nyore, asi icho chinhu icho vashandisi vazhinji vanga vachiri kusaziva.
Isu tinovhura Google Mapplication application pane yedu iPhone kana iPad
Isu tinotanga kufamba kwakatungamirwa kune imwe nzvimbo, sarudza chero zvazvingava, zvinongova kungoshandura museve icon.
Batisisa pasi museve wechiratidzo kwemasekondi mashoma
Anosarudza mota achasvinura matinokwanisa kusarudza pakati peanotevera
A yeyero SUV
Uye ndozve nyore nyore isu kuti tibvise iyo inofinha yekufambisa museve paGoogle Mepu nekurova. Iko shanduko inonakidza, zvisinei isu tinofanirwa kutaura izvozvo Iyi kugona kweGoogle Mepu haisati yawanikwa kune vese vashandisi, Sezvazvinowanzoitika nerudzi urwu rwekushanda, irikutumirwa otomatiki uye kudzadzarika pasina kudiwa kwerudzi rupi rwechishandiso chekuvandudza. Naizvozvo, kana iwe uri kuyedza kuichinja nekudzvanya museve uye usati uchikwanisa kuzviita, usazvidya moyo, mumazuva mashoma anotevera iyo yekuvandudza ichasvikawo kwauri uye uchakwanisa kugadzirisa Google Museve museve, sezvaunoda , panguva ino, iwe unoziva kuzviita sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Chinja museve unofinha weGoogle Mepu yemota (TUTORIAL)
Maitiro iwayo haashande kwandiri
Zvinondishandira, asi ini ndoda kudzokera kumuseve uye handikwanise kuzviita sezvandaita nemota
Apple inovhara zvitoro zvayo muChina nekuda kweiyo Wuhan coronavirus